Home /Blog/Garowe:Mowshinkii madaxwaynaha oo loo weeciyay wasiirada
Mowshin ka dhan madaxwaynaha Puntland oo ay wadeen xildhibaanada baarlamaanka Puntland oo ku eedaynaya mashiinka lacagta shilin Soomaaliga lagu daabaco ee sababtay sicir bararka iyo arimaha amaanka oo habacsanaan ay ka jirto ayaa loo weeciyay mowshinkaasi dhinaca wasiirada Puntland in lagu rido.
Sida xogta aanu ku helayno madaxwaynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa xalay ilaa saakay aan seexan , isagoona ku howlanaa sidii mowshinka uu gees isaga riixi lahaa.
Waxaa jirta isfaham laga gaaray in la rido golaha wasiirada Puntland , taasi oo dad badan ay u arkaan wasiirada inay yihiin kuwa ku shaqeeya siyaasadda madaxwaynaha , ayna ahayd madaxwaynaha in wax laga waydiiyo sicir bararka ka dhashay makiinadda lacagta iyo xuquuqda aan la siin shaqaalaha dowladda iyo ciidamada qalabka sida.
PuntandNews24 ayaa og wasiirada Puntland inay yihiin kuwa ugu liita xagga dhaqalaha , iyagoona noloshooda ku maareeya lacago ay ka helaan asxaabtooda dalka jooga , lacagta ugu badan ee dowladda soo gasha lama oga halka ay marto.
Golaha baarlamaanka ayaa iminka kusii qulqulaya hoolkooda , waxaana ay u badantahay inay ridayaan golaha wasiirada ee Puntland.
Deg deg: Golaha wasiirada Puntland oo la riday